Ra'iisul Wasaaraha DKMG Ah Maanta Ka Dhoofay Magaalada Muqdisho.
Md. Xasan Abshir Faarax, Ra'iisul wasaaraha dawladda KMG ah, ayaa maanta ka dhoofay magaalada Muqdisho, isagoo ku sii jeeda dalka boqortooyada Sucuudiga, Warar aan la xaqiijin ayaa sheegaya in Xasan Abshir uu socdaalkiisu quseeyo arimo ku soo kordhay caafimaadkiisa.
Md. Xasan Abshir wuxuu sii mari doonaa dalka Kenya iyadoo warar ku dhodhow Ra'iisul wasaaraha ay sheegayaan in uu la kulmi doono guddiga qabanqaabada shirka dhowaan la filayo in ay marti galiso dawladda Kenya.
Wafdigii Ka Socday IGAD Oo Maanta Gaaray Jawhar
Guddigii farsamo ee ay IGAD u soo dirtay dalka Soomaaliya si ay u darsaan dhinacyada isku haya Soomaaliya, ayaa maanta gaaray gobolka Sh/Dhexe, magaala madaxdiisa Jawhar, halkaas oo ay kula kulmi doonaan guddoomiyaha guddiga siyaasadda gobolkaas Md. Maxamed Dheere.
Guddiga ayaa la rajaynayaa inay kala hadli doonaan Maxamed Dheere arimo quseeya shirka Nairobi ka dhici doona bisha September ee sanadkan aynu ku jirno, guddiga ayaa usii kicitimi doona gobolo kale oo dalka ka mida sida Puntland, oo ay iskaga soo horjeedaan Col. C/laahi Yuusuf iyo Col. Jaamac Cali Jaamac.
Si kastaba ha ahaatee, waxay guddigani sii uruurin doonaan warbixino ay u gudbin doonaan qaban qaabiyayaasha shirka intaan la gaarin bishan September oo caasha nagu haysa, Waxaa muran weyn uu ka dhex jiray dawladaha IGAD oo iyagu isku khilaafsanaa, qaabka looga soo qayb galayo shirkan iyo cidda mudan in lagu heshiisiiyo, maadaama ay samaysmeen ururo iyo axsaab fara badan oo dhowaan looga dhawaaqay dalka gudihiisa ka dib markii la maqaly in Soomaalida mar kale loo qabanyo shir dib u heshiisiineed. Kooxda SRRC ee lagu soo dhisay Hawaaze ayaa aaminsan in cidda xaqqa u leh inay shirkan ka qayb gashaahi ay tahay SRRC iyo xukumadda KMG ah, oo ay iyagu ugu yeeraan kooxda Carta.
Dhinaca kale, xisbiyadan hadda samaysmay ayaa iyaguna imminka ku dooda inay xaq u leeyihiin ka muwaadin ahaan inay samaystaan xisbiyo ayna qayb libaax ka qadan karaan samata bixinta dalka iyo dadka Soomaaliyeed, waa sida ay hadalka u dhigaane.
Ilaa iyo hadda ma cadda dhinacyada ka qayb gali doona shirkan, oo inta badan ee dadka siyaasada indha indheeya ay ka dayrinayaan waxa ka soo bixi kara shirkan, iyagoo taas sabab uga dhigaya ismaandhaafka ka dhexeeya qolada IGAD oo iyadu hormuud ka ah xallinta mashaakilaadka Soomaaliyeed.
Dawladda KMG ah ee lagu soo dhisay Carta, ayaa in badan ku celcelisay inaysan aqbalayn sida Itoobiya oo ka mida wadamada safka hore ee xalinta dhibaatada Soomaliya, ay wax u doonayso oo ah in laga soo bilaabo shirka meel eber ah, dawladda KMG ah ayaa taas ka soo horjeesatay kuna adkaysanaysa ilaa iyo hadda inay shirkaas tagi doonaan iyagoo dawlad Soomaaliyeed ah.
Si walba ha ahaatee, waxaa imminka laga wardhowrayaa bal wixii ka soo baxa shirkaas, iyadoo dadka Soomaaliyeed ay horey ugu hungoobeen dhowr iyo toban shir oo ka horeeyey midkan hadda la qaban doono.